6 kalluunka biyaha qabow loogu talagalay aquarium-kaaga, miyaad wada garanaysaa? | Kalluunka
Kalluunka biyaha qabow
Monica Sanchez | | Aquarium biyo qabow
Miyaad ka fikireysaa inaad xoolo yeelato laakiin aadan haysan waqti badan oo aad ku daryeesho? Marka waxaan kugula talinayaa inaad iibsato quraaradda iyo xoogaa kalluun biyo qabow. Kuwani, waxay ka duwan yihiin kuwa ku nool cimilada kulaylaha, uma baahna heerkulbeeg; kaliya in biyuhu nadiif yihiin oo, dabcan, in cunto la siiyo dhowr jeer maalintii.
In kasta oo aysan jirin noocyo badan oo la heli karo, runtu waxay tahay inay jiraan ku filan si loo dejiyo aquarium-ka ugu xiisaha badan. Ogow astaamaha ugu waaweyn ee kalluunka biyaha qabow iyo daryeelka ay u baahan yihiin inuu noolaado dhowr sano.
1 Waa maxay kalluunka biyaha qabow?
2 Waa maxay daryeelka ay u baahan yihiin?
3 Noocyada kalluunka biyaha qabow
3.1 Baal casaan
3.3 Koi carp
Waa maxay kalluunka biyaha qabow?
Kalluunka biyaha qabow waa kuwa Waxay ku nool yihiin badaha halkaasoo celceliska heer kulku u dhexeeyo 16 iyo 24ºC.. Jidhkoodu waa wareegsan yahay, oo leh hal baal ama laba baal, oo noqon kara wax ka yar ama ka yar oo ku xiran noocyada kalluunka.
Haddii aan ka hadalno aragtida, inta badan ma fiicna, laakiin taasi dhib kuma aha iyaga, tan iyo mahad sankooda iyo garka afkooda ku hareeraysan iyaga ayaa is hagi kara oo ogaan kara jiritaanka xayawaan kale taas ayaa ku soo dhowaanaysa.
Guud ahaan, waa xayawaan dagan oo aayar dabaalan. Sababtaas awgeed, Wax badan ayey kaa caawin karaan inaad nasato.
Inuu caafimaad qabo kalluunka biyaha qabow, aad ayey muhiim u tahay inaan u fidino daryeel aasaasi ah, kuwaas oo kala ah:
Cunto: Waa lagama maarmaan in la siiyo cunno tayo leh, oo aan ka heli doonno dukaamada alaabada xoolaha. Waa inaad ku siisaa cuntada inta ay le'eg tahay, si kuwa yaryar ama kuwa dhexdhexaadka ah loo siiyo granules, iyo kan ugu weyn ee ka soo baxa. Soo noqnoqoshada waxay noqon doontaa 2 ilaa 3 jeer maalintii, iyo had iyo jeer qadarka ay ku cuni karaan ilbiriqsiyo.
Dayactirka: Waxaa si fiican lagugula talinayaa inaad ku haysatid barkadaha dhalooyinka ama aquariums-ka, oo leh biyo ay pH udhaxeyso 6,5 iyo 7,5. Meesha ay ku yaalliin waa in si fiican loo nadiifiyo inta u dhexeysa hal ilaa laba jeer usbuucii, iyadoo kalluunka lagu ridayo baaquli ama weel biyo leh ilaa gurigooda laga tagayo oo aan la taaban.
Hadda oo aad ogtahay sida ay yihiin iyo sida ay iyagu isu daryeelaan, waa waqtigii la ogaan lahaa waxa noocyada kalluunka biyaha qabow iyagu waa kuwa ugu caansan aquariums-ka.
Kani waa mid ka mid ah kalluunka aan inta badan ka helno dukaamada xayawaanka lagu iibiyo. Magaceeda cilmiyaysan waa Puntius conchonius, wuxuuna u dhashay Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, iyo Burma. Waa aad u adkaysta, Taageerida heerkulka u dhexeeya 17 iyo 25 darajo Celsius. Markay qaan gaaraan, dhererkoodu waa 14cm.
Kalluunka loo yaqaan 'Goldfish', oo magiciisa saynisku yahay Carassius auratusIn kasta oo loo yaqaan wax ka badan sida loo yaqaan 'carpín' ama kalluunka guduudan, haddana waa midka ugu caansan. Waxay asal ahaan ka timid Shiinaha, oo ay ugu weyn tahay - qiyaastii 15cm oo qaan-gaar ah- aad ayey ugu habboon tahay in lagu dhex haysto aquariums-ka oo kala cabir duwan. Waxaa jira noocyo badan, sida Indhaha Xumbada ama Madaxa Libaaxa, laakiin mid kasta oo ka mid ah waad ku raaxeysan kartaa hiwaayaddan adiga oo aan walwal gelin.
Koi Carp, ama Qalliinka loo yaqaan 'Cyprinus carpio' Luqadda sayniska, waxay ka mid tahay kalluunka loogu jecelyahay. Sidoo kale waxay u dhalatay Shiinaha, in kasta oo ay deggan yihiin dhammaan badaha, marka laga reebo kuwa qabow ee ulaha. Waa qaraabo kaarboodka guud, waana inaad taas ogaataa way kori karaan ilaa 70cm haddii quraaradda weyn tahay.
Teendhooyinka iyo noocyadooda
Marbarka 'coridora' ama 'coridora pepper', oo cilmi ahaan loo yaqaan magaca Corydoras paleatus, waa mid ka mid ah kuwa loogu talo galay bilowga, tan iyo waxay u dulqaadataa sifooyinka kala duwan ee biyaha. Waxay ku taal aagga cimilada hoose ee Koonfurta Ameerika, gaar ahaan waxay ku nooshahay wabiyada Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay iyo Uruguay. Wuxuu koraa ilaa 14cm.
Kalluunkan, oo ah nooca Gambusia, waa mid aad u adkaysi badan, oo aad u badan si uu ugu noolaan karo biyo diirran iyo kuwa qabow labadaba. Waxay ku dhasheen wabiyada adduunka intiisa badan, oo ay ku jiraan Yurub, Aasiya iyo Afrika. Waxaa lagu hayn karaa aquariums-yada yar ama kuwa dhexdhexaadka ah, maadaama ay korayaan illaa 14cm, laakiin waxaan u baahannahay inaan ogaano in kalluunkan uu yahay mid hilib cun ah, iyo cuni karaa shiil noocyada kale ee kalluunka.
Kani waa mid ka mid ah kalluunka u muuqda midabbada qurxoon, laakiin sidoo kale la qabsiga, taageeraya 4ºC ilaa 22ºC. Magaceeda cilmiyaysan waa Lepomis gibbosus, waxayna asal ahaan ka timid Waqooyiga Ameerika, in kastoo maanta, inta badan ay ugu mahadceliso kaalmaynta aadanaha, waxaa sidoo kale laga helaa Afrika iyo Yurub. Waa xayawaan hilib cun, marka Laguguma talinayo inaad dhex dhigto noocyada kale ee kalluunka, mana aha in lagu celiyo xaaladdeeda duurjoogta ah. Ragga qaangaarka ah waxay kori karaan ugu badnaan 20cm.
Ilaa hadda noo gaar ah kalluunka biyaha qabow. Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinay inaad dooratid kireystayaasha cusub. Ma taqaanaa in badan oo ka yar kalluunka biyaha qabow?
Ku raaxayso shirkaddaada 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium biyo qabow » Kalluunka biyaha qabow
Inta badan kalluunka halkaas ku jira kuma noolaan karaan biyo qabow, kalluunka dahabkuna ma aha nooc kalluun ah laakiin waa nooc. Taasi waa, waxaan kugula talinayaa in qofka qoraalka qoray uu sifiican uga war helay kahor maadaama ay dad badan u horseedi karto qalad. Salaan.
Ku jawaab Blanca
Mahadsanid Miss Monica. Aad u xiiso badan oo faa'iido leh bandhiggaaga.
Jawaab Guido Obregón C.
Qorraxda qorraxdu way qurxoon tahay, laakiin anigu kuguma talin karo quraaradda dhexdeeda.Xilliga taranka, isla marka lab lab buul ka sameysto, wuxuu dilaa wax kasta oo dhaqaaqa, noocyadiisa ama nooc kale. Keliya waxay cuni doonaan wax kasta oo gacantaada ka yimaada, khibradna iguguma talin
Noolaha badda ee Pelagic iyo benthic
Intee in le'eg ayuu kalluunku socon karaa isagoo aan wax cunin